News – Shwe Naung
ခင်သဇင် ကတော့ ဆေးရုံကို အစာအိမ်ရောဂါကြောင့် တက်ရောက်ခဲ့ရ………..
N N | September 23, 2021
ပရိသတ်ကြီးရေ ခင်သဇင် ကတော့ မနေ့ စက်တင်ဘာလ (၂၁)ရက်နေ့ညနေပိုင်း လောက်က ရုတ်တရတ်ဆေးရုံ တက်ရောက် ခဲ့ရပါတယ်။ ခင်သဇင် ကတော့ ဆေးရုံကို အစာအိမ် ရောဂါကြောင့် တက်ရောက်ခဲ့ရ တာဖြစ်တယ်လို့ လည်း ဆေးရုံတက် ရောက်နေရ ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စ ာမျက်နှာကနေ သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေ ကို အသိပေးလာခဲ့တာပါ။ အခုလို အစာအိမ်ရောဂါ
N N | September 5, 2021
သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆို င်ထားတဲ့ ဆက်ဆီ သဇင်ဦးကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ်ရင်သ ပ်ရှုမေ ာစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေ းတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ရင်ကို ဆွဲဆော င်ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ သွယ်လျ ပြေပြစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အတူ လှပကြည် လင်တဲ့ အသားအရည်ကိုပါ
အတွင်းသား လေးတွေ ပေါ်အောင် ဖော်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာ၀င့်ကျော်ရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ….
N N | September 4, 2021
ပရိသတ် ကြီးရေ….ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းကျော် မင်းသမီး ချောလေး ဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ကိုအားလုံး သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ သူမဟာ အမြဲ မိမိုက်နေတဲ့ ဖက်ရှင် ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ပွဲအခမ်းအနားတ က်ရောက်လေ့ရှိတ ာကြောင့် ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစား‌တဲ့ မင်းသမီးတစ် လက်ဆိုလည်း မှားမယ် မထင်ပါဘူး။ သရုပ်ဆောင်ပိုင်း မှာလည်း ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အကောင်းဆုံး ပီပြင်စွာ
က‌လေး မျက်နှာလေးနဲ့ မိမိုက် လွန်း နေတဲ့ အလန်းစားပုံတွေ တင်ပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ် ဖြူသိင်္ဂကျော်…..
N N | August 20, 2021
ချစ်ပရိသတ် ကြီးရေ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော် ကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော်။ မော်ဒယ်လ် လောကကို ဝင်ရောက် တာ မကြာ သေးပင်မဲ့ ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ အားပေး ဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်း ရရှိ
ခုလက်ရှိလိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းမှာမို့ ရှိန်ရှိန်လေးကိုလည်းအားပေးရင်း ချစ်ရတဲ့ Fans တွေလဲ ကုသိုလ်လဲရမှာပါနော်🥰 သူမရဲ့ ဆက်ဆီကျကျ ပုံတွေတင်ပေး လိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်….
N N | July 31, 2021
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတ ဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ် ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် ကို သိကြမယ်ထ င်ပါတယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံရိပ် လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် လေး ဖြစ်ပါတယ်။ သွယ်လျ
ဝိုင်လေးသောက်ပြီး အဝါရောင်လေး နဲ့ အရမ်းကိုလှပနေပြီး ပုရိသ တွေ ရင်ခုန် သံမြန်အောင် အမိုက်စား အမူအယာ တွေ လုပ်ပြနေတဲ့ “ခက်ဝေမိုး”….
N N | July 11, 2021
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ ပုံလေး တွေတိုင်း မော်ဒယ်လ် အယ်လာ တေစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်း နေတာ ည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ဆက်ဆီ ကျကျ ရိုက် ထားတဲ့ လန်းလွန်းတဲ့ ပုံလေးကို “တင်ပေးလာ တာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊ မော်ဒယ်လ် အယ်လာ ရဲ့ အလှပုံရိပ် လေးတွေကို ပရိတ်သတ် တွေ
ကိုကိုနော် အရမ်းချော့တတ် တဲ့ကိုကို နဲ့မှ ဖြစ်မှ စိတ်ကောက် တတ်တဲ့ ကောင်မလေးမို့ 🥰ဆိုပြီး ကောက်ကြောင်း အလှကို ပြသလိုက်တဲ့ ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည်….
N N | June 23, 2021
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ သွယ်လျတဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတ ဲ့ ဆက်ဆီ မော်ဒယ် ဂုဏ်ရှိန်ဝင့်ထည် ကို သိကြမယ်ထ င်ပါတယ်။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စားပုံ ရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသ တွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင်ညို့ ယူထားတဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်လေး ဖြစ်ပါတယ်။
လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီး ကြိုတင် ဟောကြား ခဲ့ သော ကမ္ဘာတွင် ကပ်ကြီးသုံးပါး ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်မည့် အကြောင်းကို ခရစ်နှစ် (1910)ခန့် ကကြိုတင် ဟောကြား ခဲ့…
N N | June 7, 2021
လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး ကြိုတင် ဟောကြား ခဲ့ သော ကမ္ဘာတွင် ကပ်ကြီးသုံးပါး ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်မည့် အကြောင်းကို ခရစ်နှစ် (1910)ခန့် ကကြိုတင် ဟောကြား ခဲ့… လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး ကြိုတင် ဟောကြား ခဲ့ သော ကမ္ဘာတွင် ကပ်ကြီးသုံးပါး ပြင်းထန်စွာ ဖြစ်မည့် အကြောင်းကို ခရစ်နှစ် (1910)ခန့် ကကြိုတင်
ဖြူဖွေးနေတဲ့ အတွင်းသားလေးတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိလှပနေတဲ့ ဆုအိမ်စံရဲ့ ပုံရိပ်လေးများ…….
N N | April 22, 2021
ယနေ့ မှာ လည်း ဆုဆု က သူမရဲ့ လူမှု ကွန်ယက် ထက်မှာ စကပ် အတိုလေး နဲ့ အသည်း ယားစရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံလေး တွေ ကို တင်ပေး လာတာ ပါ။ ဆုဆု ရဲ့ ပုံလေး တွေတိုင်း က ကြည့်မိသူ